Iyo iPhone 7 inogona kusvika muna 32GB, 128GB uye 256GB | IPhone nhau
Nekuuya kweiyo iPhone 6s uye yayo 12Mpx / 4K kamera yakanyanya kuve pachena kuti iyo 16GB yemhando yepasi haina kukwana zvakakwana. Kwemakore akati wandei, isati yatanga iyo iPhone nyowani, mukana weiyo yekupinda modhi kuva 32GB yakaongororwa, chimwe chinhu chakaitika zvakare muna2015 neiyo iPhone 6s asi, sezvamakamboona mese, hazvina kuitika. Tiri muna 2016, tiri kutaura nezvazvo iPhone 7 uye, zvakare zvakare, isu tinofanirwa kutaura nezve izvi zvinogoneka.
Zvakanaka hongu. Gore rino pane kutaura zvakare kuti iyo yekupinda modhi yeiyo iPhone 7 / Plus ichave iri 32GB, asi kwete izvi chete: zvinoenderana TrendForce, mamwe mamodheru maviri achaonawo kuti chengetedzo yavo yakapetwa sei, saka iyo 64Gb modhi yaizonyangarika uye isu taizove neiyo 32GB, 128GB uye 256GB sarudzo. [joke mode] Zvichave zvakakwana here kuchengetedza iwo mafoto atinogamuchira kuburikidza neWhatsApp? [/ joke modhi].
Iyo iPhone 7 inogona zvakare kusvika ne256GB
Apple ingangoita shanduko kumasarudzo ekuchengetera iyo iPhone 7. Iyo 64GB vhezheni, inova ndiyo inonyanya kufarirwa sarudzo muzvizvarwa zvakapfuura, inogona kumiswa uye kutsiviwa neiyo 128GB vhezheni, kunyange hazvo sarudzo ichigere kuitwa . Kune rimwe divi, zvine chokwadi chekuti Apple ichawedzera iyo yekuchengetera sarudzo kusvika pa256GB kuitira kuti iyo iPhone 7 ive neNAND Flash ndangariro nehurefu hwakanyanya hweyese akateedzana.
Izvo zvisingaitwe neTrendForce positi ndeyekuti iwo ma256B achange aripo kune 4.7-inch modhi futi. Sezvo imi mese muchiziva kana muchigara muri iPhone News vaverengi, iyo iPhone 7 Plus / Pro ichauya neapamberi maficha, senge a mbiri kamera kana iyo Smart Connector, saka mukana wekuti iyi "iPhone Pro" ndiyo yega ine 256GB sarudzo iripo haina kubviswa.
Kana Nyamavhuvhu akasvika tinoona maPhones matsva aine zvakapetwa kaviri, zvinoramba zvichionekwa pamutengo uyo iPhone 7 Plus / Pro inotengesa. Mumakore achangopfuura takaona kuti mutengo weapuro smartphone wakawedzera sei uchienzaniswa nemakore apfuura, saka tinogona kufunga nezvezvinhu zvitatu: chekutanga ndechekuti gore rino tichaona kuwedzera kwemutengo mutsva. Chechipiri ndechekuti, uchifunga izvo Tim Cook akaziva kuti iyo iPhone chishandiso chinodhura, tora mukana wekuwedzera kwekuchengetedza kuchengetedza mutengo pasi. Yekupedzisira ndiyo iyo yatinoda kuona zvese, asi zvishoma mukana: tichifunga mazwi aTim Cook, muCupertino vanosarudza kukanda imba nepahwindo uye kudzikisa mitengo. Ini ndinobheja pane yechipiri sarudzo. Uye newe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 inogona kusvika mu32GB, 128GB uye 256GB
Mhoro Pablo, ndinoziva izvi hazvisi kuenda pano asi chokwadi ndechekuti ndakanyorera kuforamu uye ini handina kuwana chinongedzo chekunyoresa muemail yangu. Zvisinei hazvo, chandaida kuziva ndechekuti dai vakaona kuti WhatsApp yakagadziridzwa zvekare ne "bug fix" iyo yavave netsika. Chaizvoizvo ndaida kuziva kuti ndedzipi shanduko dzavakaita izvozvi sezvo ini ndisina kuigadziridza nekuti ini ndaive neiyo jailbreak uye ndinotya kuti mamwe madhiri andinoshandisa muWhatsApp anomira kushanda. Ndatenda pamberi pezve mhinduro yako.
Mhoro Cesar. Miguel, ndiye iye anowanzo chengeta aya matsva nekukurumidza, uye ini handina kukwanisa kuiburitsa nezuro. Mune yangu chaiyo kesi, ini ndakaona iyo yekuvandudza uye handina kukwanisa kuiburitsa, asi ini ndakatarisa kune akasiyana midhiya kuti ndione kana paive nechimwe chinhu chakakosha. Sezvo ivo vakadzoka kunoisa vanofara "Bug Fixes", isu hatigone kuziva izvo zvinounza. Hongu, ndinogona kukuudza kuti ini handina kuwana chero chinhu chitsva, asi kuti mune vhezheni yapfuura ndakaverenga kuti panogona kunge paine bhagi iyo yaitadzisa kuendesa kwekubatanidza kuburikidza neWhatsApp. Kana ini handina kuburitsa iyo nhau muzuva rayo nekuti ndakaedza zvese zvandaigona uye handina kukwanisa kubereka kutadza ikoko.
Ndiri kukuudza nezve iyi bhaggi nekuti zvinogona kunge zviri izvo zvezvimwe zvinogadziriswa zvinounzwa neshanduro iyi. Chinhu ndechekuti "Bug Fixes" inotipengesa nekuti WhatsApp chishandiso chakakosha kwazvo, asi isu tinongogona kutaura izvo zvatinotenda uye kunyora nezve "mania" avakabata.
Ndinokutendai nemhinduro yenyu, ndinoda uye ndinoremekedza webhusaiti ino sezvo vaverengi vanogara vachititeerera, izvo zvakakosha sezvo vachiratidza kukomba nekuzvipira kunewe newebhusaiti. Makorokoto !!
Ndinokutendai nekuverenga kwedu 😉
Ivo vese "vanogona." Izvo zvinoita sezvisina basa kwandiri, asi kana iwe uchida kuenderera seizvi, ndinokusiira imwe chinyorwa. Iphone 7 inogona kuve nemavhiri maviri uye kuva bhasikoro
Apple inotumira kukoka kweWWDC16. Tarisa nguva yechiitiko munzvimbo yako